Posted by ဇနိ at 2:08 PM
My Wonderful Moral Thoughts September 19, 2008 at 4:05 PM
အားလုံးသော သံယောဇဉ် ကြိုးတွေကို အထုံး၊ အဖု၊ အထစ်မရှိအောင် ချောမွေ့တဲ့ သံယောဇဉ် ကြိုးလေးတွေနဲ့ အမြဲချစ်နိုင်ကြပါစေ။
အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ။ ချစ်ခြင်းဖြင့် အပြစ် ကင်းနိုင်ပါစေ။
ဖိုးသောကြာ September 19, 2008 at 4:14 PM
ဟားဟားဟား ဒိုင်ယာလော့ခ်က မူရင်းဟုတ်လောက်ဘူး။ ဆင်စာမိထားတယ်ထင်တယ် တကယ်ဆို အချိုးလေးရှေ့က တစ်ခုရှိဦးမယ်။ :P ဟီးးးးးးးးး
Anonymous September 19, 2008 at 5:27 PM
ိdialogue က မူရင်းလားဟင်း)
May Moe September 19, 2008 at 6:58 PM
အထုံး၊ အဖု၊ အထစ်မရှိအောင် ချောမွေ့တဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးလေးတွေ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မမနိတို့ ကိုနိတို့ကကိုတော့ မှီမယ် မထင်ဘူး။ ချစ်နိုင်လိုက်ကျတာ :P
nu-san September 19, 2008 at 7:29 PM
မဇနိ ရေ.. စကားပြောနေတာတွေက တကယ်လားဟင်.. တကယ်ပဲ ဖြစ်မှာပဲ.. ကိုဇနိက “ဟား ဟား အချိုးလေး ”ဆိုပြီး စကားကို မပီကလာပြောတယ်ဆိုတော့ ဒါတကယ်ဖြစ်လောက်တယ်.. :D :D
မဇနိရေ.. ပို့စ်လေးဖတ်ရတာ တကယ်ကို ကြည်နူးမိပါတယ် တကယ်ပါ.. အမှန်တော့ ချစ်သူ ရည်းစားဘ၀ကတည်းက သံယောဇဉ်အခြေခိုင်မှ အိမ်ထောင်ကျရင် ညှိယူလို့ရမှာ.. အဖုအထုံးတွေ ကင်းနိုင်သမျှ ကင်းတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ.... (ကိုယ်လည်း သိပ်ပြီး တတ်လို့ သိလို့တော့ ဟုတ်ဖူးနော်.. အဟီး.. ) :P
Republic September 19, 2008 at 7:50 PM
ဟုတ်တယ် မမနိ.. ကြိုးတစ်ချောင်း ကို ပုံမှန်ချည် ပြီး ၊ ပြန်ဖြေကြည့်ရင် ကြိုးပေါ်မှာ အရာကျန်ခဲ့မှာပါ ၊၊ ထုံး လိုက်တဲ့ ဆက်ထုံး အတိမ်အနက် ကို လိုက်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့အရာ(ဒဏ်ရာ) အကြီး အသေး ကွဲပြားမှာပါ ၊၊
အဲဒီ ဆက်ထုံးလေးတွေကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေက ကြောက်စရာကောင်းလှတယ် ၊၊ ပတ်
၀န်းကျင်မှာ မြင်ရတွေ့ရ သာဓက ပေါင်းများစွာပါပဲ ၊၊
မမနိ ပြောပြသလို ဂရုစိုက် အလေးထားသင့်ပါတယ်၊၊
တစ်ဦး နဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန် နားလည်မှုတွေနဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေ ခိုင်မြဲ ရစ်ပတ်နိုင်ကြပါစေဗျာ ၊၊
PAUK September 19, 2008 at 8:11 PM
Moe Cho Thinn September 19, 2008 at 8:13 PM
ညီမ နိနိ က အရစ်ထုံးလေး ပါလား။
ကိုဇနိကတော့ သဘောကောင်း၊ သည်းခံ၊ ဂရုစိုက်တတ်ပုံပဲ။
တယောက်က နောက်၊ တယောက်က ဖြောင့်..၊ လိုက်လဲ လိုက်ပါပေ့။
Kay September 19, 2008 at 9:23 PM
အော်- အထုံးလေး တွေ ထုံးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့..အထုံးအဖြေ ကောင်းတဲ့သူ ရှိလို့ပေါ့။း)
GreenGirl September 19, 2008 at 10:28 PM
အားကျတယ်ဗျိုးးးးးး ဒီမှာ ထုံးချင်တာတောင် ဘယ်သူ့ကို သွားထုံးရမှန်းသိဘူးး(
Yu Wa Yi September 20, 2008 at 7:15 AM
မဇနိလေးက အပီအပြင် အတည်ရေးနေတာထင်တယ်။ အစ်မ ၀င်မနောက်မိအောင်သတိ
ထားပြီးရေးဦးမှ။ အစ်မလည်း အရင်တုန်းအဲလိုရစ်ဖူးတယ်။ အဲဒီထက်ပိုဆိုးမယ်။ နောက်တော့သူက သာသာလေးပဲပြန်ပြောတယ်လေ.“အဲလိုရစ်တတ်တဲ့ ကလေးတွေမွေး
လာရင်တော့ မောင်ရင်တို့ မလွယ်ဘူးဗျာ”တဲ့။ သူ့ ကိုယ်သူပြောသလိုလိုနဲ့ သူများကိုပညာ
ပေးလိုက်တာလေ..။ ခုတော့ကောင်းတယ်။ တို့ ကရစ်စရာမလိုတော့ဘူး။ သူ့ ကလေး၂
ယောက်ရစ်တာပဲ ဒိုင်ခံဖြေရှင်းနေရရှာလေရဲ့။ ခုချိန်မှာတော့ တို့ လည်းသူ့ ကိုမရစ်အား
တော့ပါဘူး။ ရစ်စရာရှိရင် ကျောင်းက အပည့်တွေကိုပဲရစ်တော့တယ်။ ဒါမှသူတို့ ပိုတော်
ကိုနိ က အစ်မ ကိုတော်တော်ချစ်တာပဲ နော် နော် နော် နဲ့နေတာပဲ ဟီးဟီးး မဖြစ်နိုင်တော့ရင်လည်း ဒါပဲကွာ ဆိုပြီး ဂလောက် ပေးလိုက် ဟားဟား မြှောက်ပေးနေတာ တကယ်မလုပ်နဲ့ အဲ့တော့မှ မဇနိ က..အောင်မငီးးအစ်ကိုရဲ့ ကျမကိုထားခဲ့ပြီလားဆိုပြီး လိုက်လာမှဖြင့် ဟုတ်ပေ့ပဲ အဲ့လိုဆို ပွဲစဉ်ကပြီးနေပြီး ဘယ်လောက်မိုက်သလဲ??? ;)
saingmin September 20, 2008 at 10:36 AM
လန်းတယ်ဟေ့။။မိုက်တယ်ကွာ.. :P :P
မြရွက်ဝေ September 20, 2008 at 1:32 PM
ဩ မနိလည်း ရစ်တာပဲကို။ ရစ်ချွဲဆိုတာ အဲဒါပေါ့။ မနိတို့ကမှ ပိုတတ်နေသေးတယ်ထင်တယ်။ :D
Andy Myint September 20, 2008 at 2:34 PM
အချော့တော်တဲ့သူနဲ့ အချွဲကောင်းတဲ့သူ ချစ်ကြပုံကိုက ချစ်ဖို့ ကောင်းနေတာ....
မဇနိ September 20, 2008 at 7:43 PM
ချစ်ခြင်းဖြင့်အပြစ်ကင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ် ညီမ နန္ဒာရေ
ရှုး တိုးတိုး ကိုဖိုးသောကြာ မှန်တာတွေ သိပ်မပြောနဲ့နော်
မမဂျစ် ဟီး ဟီး မူရင်းကြီးဗျ
မေမိုးလေးက စိတ်ကောက်တာ ခဏခဏမို့လို့နေမယ်
ဟား ဟား မမနုစံ ခန့်မှန်းတတ်နေပြီ
ကိုဇနိက အကျင့်ပါနေတာ အဲလိုပြောတာကို ဟား ဟား
ညီမလည်း နားလည်သလောက်လေး ပြောကြည့်တာပါ အဖုအထစ်တွေ နည်းအောင်တော့ ကြိုးစားယူရမှာပေါ့နော်
သာဓကတွေကို လန့်နေလား ကိုကြီး ၀ီ လူပျိုကြီးတော့ မလုပ်နဲ့နော်
ပေါက် ကြည်နူးရတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူး
မမချိုသင်း အရစ်ထုံးလေးဆိုပြီး မခင်ဘဲမနေပါနဲ့နော်
မမကေသွယ် အထုံးအဖြေကောင်းတဲ့ကိုဇနိကို ဆိုးကြည့်တာ ဟုတ်တယ်ဗျ
ညီမစိမ်း အားကျတယ် အားကျတယ်လား
မမယုဝရီ ဆိုင်တယ်ဗျ ကိုဇနိလည်း ပြောတယ်
“အေးပါ သူ့လိုအဆိုးလေးတွေ ရလာမှ တွေ့မယ်” တဲ့။
တွေ့ခါမှတွေ့ရောနော် တတ်နိုင်ဘူးလေ ဆက်ရစ်လိုက်အုံးမယ်
မောင်မျိုးနော် ဟင်းချက်မကျွေးဘဲထားမယ် မြှောက်ပေးနေတယ်
saingmin ရေ တီတီဓနိ တဲ့လား
ပိုတတ်တာ မဟုတ်လောက်ဘူးနော် ညီမမြရွက်ဝေဆီ လာချောင်းနားထောင်လိုက်မယ်
ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါ အကိုအန်ဒီ
တန်ခူး September 22, 2008 at 5:05 PM
ရုံးမှာထဲက ဒါလေးဖတ်ပြီး ကော်မန့် ပေးချင်လိုက်တာ ကလိကလိနဲ့ … ခုတလော အင်တာနက်က အရမ်းနှေးတော့ အိမ်ရောက်တဲ့အထိ အောင့်ထားရတာ… ချစ်တတ်လိုက်ကြတာ… စိတ်ကောက်တဲ့သူကလဲ ချစ်စရာလေးဖြစ်အောင် စိတ်ကောက်တတ်တော့ ချော့တဲ့သူကလဲ ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ ချော့… မဇနိရေ… အချော့ကောင်းတဲ့သူကို ရွေးထားတယ်ပေါ့… ခုလို ချောမွေ့ ပြေပြစ်ပြီး အချစ်တွေနဲ့ ခိုင်မြဲနေတဲ့ ချစ်ကြိုးလေးတမျှင်ကို တွေ့ ရတာ ၀မ်းသာစရာပါ… ဒီထက်ချစ်နိုင်ကြပါစေ…
ဝေလေး September 23, 2008 at 7:43 PM
ကြည်နူးစရာလေး . မမနိကို ကိုဇနိက တော်တော်ချစ်တာပဲနော်....
အထုံးဆိုတာမကောင်းဘူးဆိုတာဟုတ်တာပဲ. ... :P
မမနိ အချွဲကောင်း.... ဟိ
တားမြစ် ထားသော... September 24, 2008 at 11:43 AM
အင်း.... သားသား ရှက်ရှက်တွေပဲ။
ပျော်ရွှင်စရာ အနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
မဇနိ September 25, 2008 at 9:23 AM
ဟုတ်ကဲ့အမတန်ခူး ဒီကြိုးလေးခိုင်မြဲအောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်
အချွဲကောင်း လား ညီမဝေလေး ညီမလေးကရော..?